Rompers – အဆိုပါ Tailoress
မေ 10, 2017 | အထူးပြောစရာမရှိ | ကလေးများ, Rompers, tutorials
ပုံတွေကိုပုံစံကို download အတွက်ရရှိနိုင်ပါ. လှမ်း 1 Print the pattern piece, ensure to stick the pages together before attempting to cut any of the pieces out. Begin by cutting out pieces. Decide whether to useaHOOD or not and cut the correct OPENING CUFF pattern piece. လှမ်း2Lay inner hood pieces […]
February 16, 2017 | အထူးပြောစရာမရှိ | ကလေး, ကလေးများ, အချိန်မတန်မီကလေး, Romper, Rompers, tutorials
Images are available in the downloaded version. Section 1 မှတ်စု: If you are printing the pattern split onto A4 pages, first arrange the pages and stick together to ensure you match the correct pieces together. Lay the BACK pieces RIGHT SIDES together. Pin and stitch the center back seam. Trim and finish the seam allowance. […]
Images are available in the downloaded version Step 1 Print the pattern piece, ensure to stick the pages together before attempting to cut any of the pieces out. Begin by cutting out pieces. လှမ်း2ရှေ့ တင်. 1 RIGHT SIDES together with the BACK. တွယ်အပ်, stitch and trim the side seam allowance. Finish using zig-zag […]
နိုဝင်ဘာလ 8, 2016 | အထူးပြောစရာမရှိ | ကလေး, ကလေးများ, အဝတ်အစား, Romper, Rompers, tutorials
လှမ်း 1 ချုပ်မယ့်မှို အသုံးပြု. မဆိုချိန်ခွင်လျှာအမှတ်အသားများ marking အားလုံးအပိုင်းပိုင်းထွက် Cut. တစ်ဦးအလတ်စားအရွယ်အစားချုပ်အပေါ်တစ်ဦးကဘောအပ်ချုပ်စက်ကိုဆေးထိုးအပ်ကိုသုံးပါ. လှမ်း2ရှေ့နှင့်နောက်ကျောပခုံးချုပ်ရိုးများနှင့် pin ကိုများနှင့်ချုပ်ကိုက်ညီ, overlock သို့မဟုတ် zig-zag ဟာချုပ်ရိုးထို့နောက်ချုပ်ရိုးစရိတ်ချုံ့. From now on this will be referred to […]
သိုးသငယ် Playsuit သာ costume ညဝတ်အင်္ကျီဘောင်းဘီပွသင်ခန်းစာ
လှမ်း 1 ချုပ်မယ့်မှို အသုံးပြု. မဆိုချိန်ခွင်လျှာအမှတ်အသားများ marking အားလုံးအပိုင်းပိုင်းထွက် Cut. တစ်ဦးအလတ်စားအရွယ်အစားချုပ်အပေါ်တစ်ဦးကဘောအပ်ချုပ်စက်ကိုဆေးထိုးအပ်ကိုသုံးပါ. လှမ်း2ရှေ့နှင့်နောက်ကျောပခုံးချုပ်ရိုးများနှင့် pin ကိုများနှင့်ချုပ်ကိုက်ညီ, overlock သို့မဟုတ် zig-zag ဟာချုပ်ရိုးထို့နောက်ချုပ်ရိုးစရိတ်ချုံ့. From now on this will be referred […]
ကွောငျကလေး – Playsuit Costume Pyjama Tutorial